कसरी आईओएस9मा डाटा खपत कम गर्न आईफोन समाचार
आईओएस9मा कसरी डाटा खपत कम गर्ने
अलेजेन्ड्रो क्याब्रेरा | | iOS 9, ट्यूटोरियल र म्यानुअल
योजनाहरू "असीमित डेटा स्थानान्तरण" हुन थालेदेखि हामी मध्ये धेरैले डाटाको खपत समीक्षा गर्दैनौं, तर जब कम्पनी बिल आउँदछ हामी ठूलो आश्चर्य हुन्छ किनकि धेरै जसो योजनाहरूको डाटाको सीमा हुन्छ कि यदि हामी यसलाई पास गर्छौं भने, "अतिरिक्त उपभोग" बिल गर्न थाल्छ। नयाँ परिवर्तनको साथ आईओएस in मा उच्च मोबाइल डाटा प्रयोगको बारेमा असंख्य गुनासोहरू आएका छन्। यदि यो तपाईंको लागि मामला हो भने, हामीसँग केही छ सुझावहरू तपाईं आफ्नो मोबाइल डाटा खपत लाई कम गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको आईफोनमा।
1 आईक्लाउडका लागि मोबाइल डाटा प्रयोग बन्द गर्नुहोस्।
2 आईट्यून्स स्टोर र अनुप्रयोग स्टोरमा मोबाइल डाटाको साथ स्वत: डाउनलोडहरू अक्षम गर्नुहोस्।
3 वाइफाइ सहायक असक्षम गर्नुहोस्।
4 केहि अनुप्रयोगहरु को लागी मोबाइल डेटा को उपयोग प्रतिबन्धित गर्नुहोस्।
5 पृष्ठभूमि अपडेट असक्षम गर्नुहोस्।
6 उच्च-गुणवत्ताको संगीत स्ट्रिम गर्नबाट बच्नुहोस्।
7 सेल फोन डाटा पूर्ण रूपमा प्रयोग नगर्नुहोस्।
आईक्लाउडका लागि मोबाइल डाटा प्रयोग बन्द गर्नुहोस्।
यदि तपाईं आईक्लाउड बिभिन्न उपकरणहरूमा काम गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यसले सामान्य डाटा खपत भन्दा बढी लिन सक्छ। यदि तपाईं पृष्ठ कागजातमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं प्रयोगको बखत मोबाइल डाटा प्रयोग गर्नुहुनेछ। ती सबै परिमार्जन र परिवर्तनहरू क्लाउडमा बचत भइरहेको छ र तपाईं यस प्रक्रियाको बखत डाटा प्रयोग गर्नुहुनेछ। आईक्लाउडमा मोबाइल डाटा प्रयोग बन्द गर्न अर्को चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
खोल्नुहोस् सेटिंग्स र प्रविष्ट गर्नुहोस् iCloud.
थिच्नुहोस् iCloud ड्राइव.
अर्को स्क्रिनमा, तल स्क्रोल गर्नुहोस् र तल तपाईंले निष्क्रिय गर्नुपर्दछ «मोबाइल डाटा प्रयोग गर्नुहोस्"।
यो सुविधा असक्षम गर्दा, आईक्लाउड अब मोबाइल डाटा प्रयोग गर्दैन कागजात वा डाटा स्थानान्तरण गर्न, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै मोबाइल डाटा बचत गर्दछ।
आईट्यून्स स्टोर र अनुप्रयोग स्टोरमा मोबाइल डाटाको साथ स्वत: डाउनलोडहरू अक्षम गर्नुहोस्।
तपाईंको उपकरणमा एप्लिकेसन अपडेटहरू डाउनलोड गर्दा भारी डाटा उपभोग हुन सक्छ। यदि तपाईं यी स्वचालित अद्यावधिकहरू डाउनलोड गर्न गइरहनु भएको छ भने, यो तपाईं आफैं हुनुभन्दा राम्रो हुन्छ तपाईंको अनुप्रयोगहरू डाउनलोड र अद्यावधिक गर्नु अघि वाइफाइ नेटवर्कमा जडान गरिएको, किनकि केहिसँग धेरै ठूला आकारहरू छन्।
En सेटिंग्स फेला आईट्यून्स स्टोर र अनुप्रयोग स्टोर.
यो सेक्सनमा खोज «मोबाइल डाटा प्रयोग गर्नुहोस्«। यो विकल्प असक्षम गर्नुहोस् र तपाईं जानु राम्रो हुनुहुन्छ।
वाइफाइ सहायक असक्षम गर्नुहोस्।
वाइफाइ समर्थन जत्तिकै हानिकारक हुन सक्छ, किनकि यो पनि सहयोगी हुन सक्छ। कमजोर वाइफाइ संकेत आपूर्ति गर्न को लागी जब, वाइफाइ सहायता मोबाइल डाटा प्रयोग गर्न सुरू गर्दछ खराब सेवाको साथ मद्दत गर्न। जबकि यसले सहयोग गर्दैन, तपाईं मोबाईल डाटाको एक टन यो प्रयोग नगरे पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो सुविधा अक्षम गर्न:
खोल्नुहोस् सेटिंग्स र क्लिक गर्नुहोस् मोबाइल डाटा.
अन्तमा स्क्रोल गर्नुहोस् र तल तपाईंले निष्क्रिय गर्नुपर्दछ Wi-Fi समर्थन.
यदि तपाईंसँग डाटा खपत वृद्धि भएको छ, तपाईं वाइफाइ नेटवर्क प्रयोग गर्नुहुँदा, यो वाइफाइ समर्थन समस्या हुन सक्छ।
केहि अनुप्रयोगहरु को लागी मोबाइल डेटा को उपयोग प्रतिबन्धित गर्नुहोस्।
त्यहाँ केहि अनुप्रयोगहरू छन् जुन अरू भन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ। केहि एप्सले डाटा खपत गर्दैन, र अरूले गर्दैन। सधैं राम्रोसँग जान्नु राम्रो हुन्छ कुन एप्सले डाटा खपत गर्दछर अधिक महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि ती अनुप्रयोगहरूको मोबाइल डेटामा पहुँच हुन आवश्यक छ भने।
जानुहोस् सेटिंग्स र प्रविष्ट गर्नुहोस् मोबाइल डाटा.
एक पटक भित्र, तपाईले फेला नभएसम्म तल स्क्रोल गर्नुहोस् अनुप्रयोगहरूको सूची.
तपाईले आवाश्यकता पाउनुहुने अनुप्रयोगहरूको लागि मोबाइल डेटाको प्रयोग असक्षम गर्न सुरू गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि अपडेट असक्षम गर्नुहोस्।
यो को लागी एक धेरै साधारण चाल हो मोबाइल डाटा बचत गर्नुहोस्। अनुप्रयोगहरूले पृष्ठभूमिमा जानकारी अपडेट गर्न सक्दछ, जब तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्न र यो पाठ्यक्रम डाटा खपत गर्दछ। यो विकल्प असक्षम गर्न सकिन्छ र वास्तवमा आईफोनको साथ प्रयोग र अन्तर्क्रियामा असर गर्दैन।
जानुहोस् सेटिंग्स -> सामान्य र क्लिक गर्नुहोस् पृष्ठभूमिमा अपडेट गर्नुहोस्.
अब शीर्षमा सुविधा अक्षम गर्नुहोस्। अनुप्रयोगहरू हुन् हरियो देखि सेतोमा परिवर्तन हुनेछ.
तपाईं अनुप्रयोगहरूको सूची हेर्न सक्नुहुन्छ जुन असक्षम विकल्पको तल पृष्ठभूमि अपडेट थियो।
यस विकल्पलाई सामान्यतया असक्षम पारिन्छ ब्याट्री बचत गर्नुहोस्, तर यसले मोबाइल डाटा बचत गर्न पनि काम गर्दछ।
उच्च-गुणवत्ताको संगीत स्ट्रिम गर्नबाट बच्नुहोस्।
एप्पलले उच्च गुणवत्ताको संगीत सुन्नको लागि विकल्प सिर्जना गरेको छ, चाहे तपाईं वाइफाइ वा मोबाइल नेटवर्क प्रयोग गर्नुहुन्न। अवश्य पनि, उच्च गुणस्तर, फाईल ठूलो। फाईल ठूलो छ, अधिक डाटा प्रसारण गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, यदि तपाईं एप्पल संगीत प्रयोग गर्नुहुन्छ र डाटा बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यो विकल्प अक्षम गर्नुपर्नेछ।
खोल्नुहोस् सेटिंग्स र विकल्पमा जानुहोस् संगीत.
विकल्प खोज्नुहोस् र असक्षम गर्नुहोस् मोबाइल डाटाको साथ उच्च गुणवत्ता.
यदि तपाईं वास्तवमै मोबाइल डाटा प्रयोग गर्नबाट जोगिन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं पनि गर्न सक्नुहुनेछ मोबाइल डाटा प्रयोग गर्नुहोस् विकल्प बन्द गर्नुहोस्। यो विकल्प असक्षम भएपछि, आईफोनले केवल एप्पल संगीत वाइफाइ मार्फत प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ।
उच्च गुणवत्ताको अक्षमता ती व्यक्तिहरूको लागि उत्तम विकल्प हो जुन मोबाइल डेटा मार्फत संगीत सुन्न चाहन्छन्, तर ठूला फाईलहरूको लागि अत्यधिक खपत चाहँदैनन्। यदि तपाइँ पाण्डोरा वा स्पोटिफाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईले यो सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरूले केवल वाइफाइ नेटवर्क प्रयोग गर्छन्।
सेल फोन डाटा पूर्ण रूपमा प्रयोग नगर्नुहोस्।
अन्तिम उपायका रूपमा तपाई सक्नुहुन्छ सेलुलर डाटा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुहोस्। यदि तपाईं गिगासको तपाईंको मासिक सीमामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र अतिरिक्त भुक्तान गर्न चाहानु हुन्न भने, त्यसो भए यो नम्बर एक विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जाऊ त्यहाँ सेटिंग्स -> मोबाइल डाटा.
विकल्प बन्द गर्नुहोस् मोबाइल डाटा.
ती सब भन्दा राम्रा हुन् उच्च मोबाइल डाटा उपयोग घटाउने सल्लाह तपाईंको उपकरणमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS9» आईओएस9मा कसरी डाटा खपत कम गर्ने
मलाई यो अविश्वसनीय लाग्छ कि कसैले पनि आईफोन s एस र s एस प्लसमा ब्याट्री असफलताको बारेमा केहि पनि टिप्पणी गरेको छैन। फोन एकदम चार्ज हुन्छ। तर धेरै अवसरहरूमा, चार्जिंगको आधा घण्टा पछि पनि, ब्याट्री सूचक अपडेट हुँदैन। वा २ वा%% अपग्रेड गर्नुहोस्। यदि तपाईंले टर्मिनल बन्द गर्नुभयो र फेरि खोल्नुभयो भने, सही ब्याट्री पहिले नै देखाईएको छ। यो मोबाईलको आधारभूत पक्ष मध्ये एक भएकोमा मलाई धेरै गम्भीर असफलता देखिन्थ्यो। मसँग आईफोनहरू परिवर्तन भएका छन् र समस्या रहिरहन्छ, र तिनीहरू नयाँको रूपमा वा ब्याकअप बहालीको साथ कन्फिगर गरिएको छ। म धेरै दुखी छु। स्याउमा यी अकल्पनीय ग्लिचहरू। माथि जाँच गर्नका लागि यदि यो ब्याकअप समस्या हो भने, मैले बुझें।
मैले यसलाई नयाँको रूपमा कन्फिगर गर्न खेलेँ र अब अघिल्लो ब्याकअप मैले यसलाई गुमाएको सबैसँग हराएँ। यस एप्पल फोरममा मानिसहरू गुनासो गर्छन्, र धेरै समस्याको बारेमा गुनासो गर्छन्। र मलाई उप्रान्त थाहा छैन यदि यो सफ्टवेयर वा हार्डवेयर हो किनकि यस्तो लाग्छ कि यो केवल 6s मा हो। मलाई 900 ००० यूरोको मोबाइलको लागि यस्तो गम्भीर असफलता मलाई लाज लाग्यो
उही कुरा मलाई6को साथ पनि हुन्छ।
ठीक छ, कि एक तरीकाले तब मलाई आश्वासन दिन्छ, किनकि यो एक सफ्टवेयर समस्या हुने छ र कुनै कडा होईन, जसको साथ यसलाई अपडेटको साथ समाधान गर्न सकिन्छ, तर यो अलि ग्लास जस्तो देखिन्छ। यो सामान्यतया आईफोन लक भएको साथ हुन्छ। स्क्रिन खुलासँग, चार्जिंग सूचक अपडेट हुँदैछ। तर यो फेरि यो हो, र फेरि सुरू गर्दा अचानक अचानक ब्याट्री झन्डै २०% माथि जान्छ
अर्कोतर्फ, अचानक, प्रत्येक चोटि मैले यसलाई खोल्दा मलाई सेब आईडी प्रमाणित गर्न सोध्छु (यस्तो चीज जुन मलाई to बर्षमा कहिल्यै भएको थिएन)। र घाँटीमा दुखाइ छ कुनै समाधान?
डार्विन फिगरुइरो भन्यो
यी सबैको अन्त्यमा आईफोन प्रयोग नगर्नुहोस्
डार्विन फिगुएरोलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंको स्यामसंग ग्रन्गीको साथ एन्ड्रोइडको साथ जारी राख्नुहोस् ... एक जो चाहान्छ र सक्दैन
अल्बर्टो सीएच भन्यो
पार्स्ले यो महसुस गर्दैनन् कि एन्ड्रोइड आईओएस भन्दा हजार गुणा राम्रो छ, जुन बढी व्यावहारिक छ र सबै चीजहरू समाधान गरिएको छ जबकि यो गधा प्रोग्रामले यसलाई एक हजार अर्डरहरू प्रदान गर्नुपर्दछ। आईओएस मानसिक रूपरेखाका लागि कार्यक्रम हो, यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने।
एक चुम्बन, अमीबास!
Alberto ch मा जवाफ दिनुहोस्
प्रश्नहरू तपाइँ सँधै आफैलाई सोध्नुहोस् जब जेलब्रेक गर्दै